Taag-taag ciidan oo ka jira Xarunta Nabad-sugidda | KEYDMEDIA ONLINE
Taag-taag ciidan oo ka jira Xarunta Nabad-sugidda
Kadib xasarado siyaasadeed oo soo billaawday horraantii bishii Juun, ayaa sidii foolkaada u qarxay todobaadkaan, kadib markii uu Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, xilka agaasimaha NISA ka raacdeeyay eedeysane, Fahad Yaasiin.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay sheegayaan ilo xog-ogaal ah, ciidamo uu hoggaaminayo taliyaha Nabad-sugidda ee Gobolka Banaadir, Yaasiin Cabdullaahi Maxamuud 'Farey' oo xalay uu Madaxweynahii muddadu ka dhamaatay u magacaabay agaasimaha guud ee NISA, ayaa dhawaan la wareegay xarunta ay ku shaqeyso hay’adda ee Habar Khadiijo.
Taag-taag ciidan, ayaa laga dareemayaa degmooyinka hoose ee Caasimadda, waxaana saacadaha soo socda la filayaa in Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Rooble, iyo Agaasimaha uu u magacaabay xilka Hay’adda, Bashiir Goobe, ay gaaraan Xarunta NISA.
Maanta ayay ku egtahay, muddadii uu RW Roobe, u qabtay inuu xilka Wareejo taliyihii hore ee Hay’adda Nabad-sugidda eedeysane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, oo loo heysto, af-duubka iyo dilka Ikraan Tahliil, oo raq iyo ruux la la’ayahay tan iyo 26 bishii lixaad ee sanadkaan.
Dad ka ag-dhow xarunta Habar Khadiijo, ayaa sheegaya in aagga lagu arkayo, ciidamada loo yaqaanno Duufaan, kuwaas oo si toos ah uga amar qaata taliyihii shaqada laga raacdeeyay, isla-maraana u badan dhallinyaro hore uga tirsaneyd Kooxda Al-Shaab, laguna xasuusto weerarradii ay ku qaadeen Madaxweynayaashii hore, (Shariif & Xasan) si ay Farmaajo kuriga ugu sii hayaan muddo labo sano ah.
Sidaas oo kale, waxaa la soo sheegayaa in ciidamo ka tirsan Howl-galka Nabad ilaalinta, AMISOM, dhawaan lagu daadiyay aagga xarunta, kuwaas oo la rumeysan yahay in ay hor-dhac u yihiin Kooxda Roobe hoggaaminayo ee ku wajahan xarunta Nabad-sugidda.
Fahad Yaasiin, ayaa ka maqan dalka, wuxuuna dhawaan sheegay inuu iska casilay xilka Agaasimaha Hay’adda, waxaana ku socdo baaritaanno ay wadaan hay’adaha garsoorka dalka.
Bogga Twitter ee Hay’adda NISA, ayaa dhawaan lagu daabacay in munaasibad ka dhacday taliska Hay’adda uu xilka kula wareegay Yaasiin Farey.